mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator
mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator
mတွင်i ကို ကို ကို rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို ကို rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.AOX လိမ့်မည် အောင် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးမှုများကို သို့ အဆိုပါ အနာဂတ် နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-R ကို ကို စီးရီး mတွင်i ကို ကို rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r, အသစ်က နည်းပညာ နှင့် ဆက်လက်နေသော cusသို့mer ဝန်ဆောင်မှု, နှင့် ကြိုးစား သို့ ဖြစ်လာသည် တစ်ဦး globတစ်ဦးl leတစ်ဦးder တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry တွင် အဆိုပါ 21 ရာစု။
(type ကိုပြောင်းလဲပစ်ရေး) input / output ကို signal ကို: 4-20mA (std configuration များ); 0-10V & 2-10V optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီး၏ shell ကို mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. မထည့်အာကာသအပူပေးစက်: ဒါဟာအိမ်ယာ၏ပြည်တွင်းရေး condensing ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးခြောက်သွေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုသည်။
AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. ပြင်ပ Module module: က module ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေနှင့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုမည်ဟုမော်ကျူး၏အာကာသတိုးပေးရန်။
အဆိုပါဒီဘာဂင်မြန်ပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator လျှပ်စစ် cam ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းသို့လေး cams ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်လိပ်ပြာနွေဦးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ အထက်ပိုင်းတစ်သော့ခတ်ခွံမာသီးတွေနဲ့နှိပ်သည်တစ်ဦးဝင်ပေါက် potentiometer အသုံးပြုသည်။
ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ် actuators.In ထို့အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်အထူးကုများမှာကျနော်တို့လယ်ကိုလျှောက်လွှာအတွေ့အကြုံနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ် industry.Years နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းအကြမ်းခံ AOX-R ကိုစီးရီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပေး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator စတင်ရန် AOX enabled ထားပါတယ် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် sophisticted ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကသို့အပြည့်အဝပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်း။
ကျနော်တို့ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Shipbuilding HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator ။
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
ဖြေကိုယခုငါတို့အီး, ATEX, gost, SIL ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက် EAC လက်မှတ်ရတယ်ပါပြီ။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီး mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: mini ကို rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်